Topnews:-Ciidanka qeybaha Beesha Habargidir oo lagu amray iney Muqdisho ka baxaan -Qiyaano Banadir State ? | Habargidir Community
Topnews:-Ciidanka qeybaha Beesha Habargidir oo lagu amray iney Muqdisho ka baxaan -Qiyaano Banadir State ?
Feb 15, 2015 - jawaab
Askarta ka tirsan qeybaha Melleteriga ,Boliiska iyo Nabadsugida Gobolka Banaadir ee u dhashay beesha Habargidir ayaa lagu amray iney 48 saacadood ku xareeyaan gaadiidka dagaalka si diyaarad loogu daad gureeyo Magaaladda Dhuusamareeb.
Ciidanka u dhashay Beesha Habargidir waxaa loo sheegay iney ka qeybgalayaan dagaalka Guriceel hasse yeeshee taasi waxeey ka dhigan tahay qiyaano la doonayo in awooda Gaashaandhiga Beesha Habargidir ee gobolka Banaadir lagu wiiqo.
Madaxweyne Garguurte iyo Taliyeyaasha beeshiisa ee Nabadsugida iyo Boliiska waxeey xusul duub ugu jiraan in si degdega loo dhiso maamul goboleedka Banaadir State sidaas darteed wuxuu qorshahoodu yahay iney Ciidanka Habargidir guud ahaan ka saaraan Muqdisho si meesha looga saaro saamiga awood qeybsiga beesha Habargidir ku leedahay Maamulka Gobolka Banaadir.
Askarta Ciidanka Beelaha Sacad iyo Saleebaan ayaa diiday iney ka qeybgalaan dagaal Guriceel looga xoreeynaa Ahlusunah waxeeyna tibaaxeen in Guriceel joogaan dadkii xoreeystay sidaas darteed loo baahan yahay in la xoreeyo Ceeldheer iyo Xarardheere oo Al-Shabaab ka arrimiyaan.
Taliyeyaasha Nabadsugida iyo Melleteriga ayaa telefoon ku wacay Sarkaal lagu magacaabo Liiban Madaxeey una dhashay Beesha Ceyr iyadoo lagu amray inuu hubka si degdega ugu wareejiyo taliska Melleteriga.
Xaalad Cakiran ayaa ka muuqata Muqdisho laakiin lama ogga in Beesha Habargidir loogu awood sheegan doono Muqdisho maadama Madaxweyne Xasan Sheekh aaminsan yahay ineysan Habargidir degaan ahaan laheyn Muqdisho.
Madaxweynaha Federalka Somalia Xasan Sheekh Maxamud wuxuu ahaa turjubaankii Cali Mahdi Maxamed xilligii dagaalkii laba biloodka,waxaana muuqato inuu weli ku jiro colaadii laga heshiiyay ee labada beelood.
Sikastaba ha ahaatee, Dhamaan Saraakiishii Melleteriga iyo Nabadsugida ugu jiray beesha Habargidir ayaa xilalkii laga qaaday iyadoo Goobaale loo magacaabay Taliye ka tirsan Ciidan lagu sheegay Daraawiishta.